खाद्यान्नमा सहुलियत- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
सरकारी निकायसँगै निजी व्यावसायिक संस्थाहरुले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर करिब २ सय खाद्यवस्तुमा छुट दिएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाबाहिर २३ र उपत्यकामा ५ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ । यी पसलमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ ।
उपभोक्तालाई सहज र सुलभ रूपमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन सरकार र व्यवसायीले छुटैछुटको अफर ल्याएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ २३ बाट सहुलियत पसल सुरु गरेको छ । यस्ता सहुलियत पसलले बजारमा मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । ‘चाडबाडमा खाद्यान्नको माग दुई–तीन गुणाले बढ्छ, ठगी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ७३ ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका छौं । यसले सरकारको उपस्थिति देखाउँछ ।’ सरकारी सहुलियत पसलसँगै व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दरमा बिक्री गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए ।
दसैंलाई लक्षित गरी बिगमार्ट, भाटभटेनी, सेल्सबेरी, सेल्सवेजलगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरले पनि छुट दिएका छन् । खुद्रा व्यापार संघलाई सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘छलफलक्रममा व्यवसायीले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘यसले केही राहत हुनेछ ।’ सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थानलगायतले छुट योजना ल्याएका छन् । सहुलियत पसलमा २ देखि ५० रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाबाहिर २३ र उपत्यकामा ५ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ । यी पसलमा ५ देखि १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । बास्मती चामलमा १० रुपैयाँ, जिरा मसिनोमा ५ रुपैयाँ, सोना मन्सुलीमा ५ रुपैयाँ, जापानी चामलमा ५ रुपैयाँ, सिमीमा १० रुपैयाँ छुट दिएको छ । जिउँदो बोका–खसी र च्यांग्रामा पनि १० रुपैयाँ छुट दिइएको कम्पनीका बिक्री/वितरण प्रमुख लालमोहन ठाकुरले बताए । ‘सहुलियत पसलले सरकारको उपस्थिति देखाएको छ । सबै क्षेत्रमा पसल सञ्चालन गर्न नसके पनि यसले मूल्य तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘खसीबोकाको हकमा निजीभन्दा केही सस्तोमै बिक्री हुन्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले पनि चिनीमा ५ रुपैयाँ छुट दिएको छ । उसले प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नुनमा २ रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले बताए । सहुलियत पसलसँगै ३ मोबाइल भ्यानबाट खाद्यान्न बिक्री गरिने उनले जानकारी दिए ।
दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छुट दिएर ८५० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । पनिरमा १० रुपैयाँ छुट दिएर ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । खाद्य व्यापार कम्पनीले उपत्यकामा एकीकृृत १ सहित थापाथली, नक्खु, जावलाखेल र भक्तपुरमा पसल सञ्चालन गरेको छ । साल्टले पनि एकीकृत १, कालीमाटीमा २, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुरमा एक–एक घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थानले एकीकृतसहित लैनचौर, न्युरोड र खुमलटारमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारी निकायसँगै व्यावसायिक संस्था बिग मार्टले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर २ सय खाद्य वस्तुमा छुट दिएको जनाएको छ । बिग मार्टका वित्त प्रमुख विवेक देवले दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्यको अफर ल्याएको बताए । सुपथ मूल्य पसलमा न्यूनतम २ रुपैयाँदेखि २५१ रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ ।
‘मुख्य उद्देश्य सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु हो । सरकारको आग्रहमा मुनाफा नराखी सामान बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सहुलियत पसलमा नुन, तेल, दाल, चिनी, चामल, घिउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको उनले जनाए । ‘हरेक दिन बेलुका तरकारीमा समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्दा बिग मार्टले चिनी प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ । भाटभटेनीका कार्यकारी अधिकृत पानु पौडेलले पनि सरकारी अनुरोधपश्चात् सहुलियत दरमा बिक्री गरेको बताए । चाडबाडमा व्यापारीले सहुलियत दिँदा प्रतिफल राम्रो हुने बताए । उनका अनुसार भाटभटेनीमा चाडबाडलाई लक्षित सबै वस्तुको खरिदमा केही न केही छुट दिइएको छ ।
खाद्य वस्तुको ४४ वटा प्रोडक्टमा नोक्सानी व्यहोरेरै बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘नुनको खरिद मूल्य १९ रुपैयाँ पर्छ । हामीले १८ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छौं । खुलामा चिनी ७५ रुपैयाँ पर्छ, हामीले प्याकिङ चिनी ७२ रुपैयाँमा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्तालाई केही राहत मिलेको छ ।’ कार्यकारी अधिकृत पौडेलले खाद्यवस्तुको बिक्रीमा नोक्सानी र अन्य वस्तुको हकमा ५ देखि १५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेर बिक्री गरेको बताए । सेल्सवेजका मार्केटिङ हेड चेतनारायण पौडेलले पनि खाद्यान्न र इलेक्ट्रोनिक सामान सहुलियत दरमा बिक्री गरेको बताए । ‘खाद्यान्नमा दुईदेखि ५ रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं, चाडबाडमा धेरै खरिद बिक्री हुन्छ । यसले सबै पक्षलाई राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै किन्ने सामानमा दुई–चार रुपैयाँ छुट हुँदा पनि सहुलियत हुन्छ । धेरै बिक्री पनि हुन्छ । थोरै अफरले पनि बिक्री बढ्न सक्छ । सेल्सबेरीका फाइनान्स प्रमुख सन्दीप प्रधानांगले ई–सेवा र मोबाइल बैंकिङबाट १५ प्रतिशत छुट दिएको बताए । त्योबाहेक एक हजारको सामान खरिद गर्दा २५ वटा सामानमा २५ प्रतिशत छुट दिएको उनले जनाए । ‘चिनी छुट दिएर ५८ रुपैयाँमा दिएका छौं,’ उनले भने ।
ई–सेवा सञ्चालन गर्ने ग्राहकले थप १५ प्रतिशत छुट (४९ रुपैयाँ) मा खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो छुटमाथि छुट हो । त्यसबाहेक चामल, दाललगायतमा पनि राम्रो छुट दिएका छौं ।’ उनले ५० वटा सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री गरेको बताए । ‘अहिले तेल र चिनीको माग उच्च छ, व्यापार दोब्बर छ, टार्गेट भेटिएको छ,’ उनले भने ।
जनहितका लागि बोल्ने को ?
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नागढुङ्गा–नौबिसे सडक खण्डको दुर्दशा, दिनहुँ हुने सडक जाम गाईजात्राको जिउँदो–जाग्दो तस्बिर बनेको छ  । राजधानीको प्रवेशद्वार, लाखौं ओहोर–दोहोर गर्ने नाकाको यस्तो हविगत हुँदा पनि राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान नपुग्नु विडम्बना हो  ।
यात्रुले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको छ । १ घन्टाको यात्रालाई ८–९ घन्टा लागेको छ । गम्भीर प्रकृतिका रोगी, प्रसूति व्यथा लागेकाहरूको वेदना असह्य बनेको छ । एकजनाको त जामकै कारण एम्बुलेन्समै ज्यान गयो । दसैंको मुखमा उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने सर्वसाधारण ह्वात्तै बढेका कारण गाडीको जाम अरु लम्बिन थालेको छ । विजयादसमीमा खुसियाली मनाउन घर फर्कनेहरू अत्यासलाग्दो सडकदेखि आश्चर्यचकित बन्ने गरेका छन् । नेपाल भ्रमणवर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा यात्राका सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएको ठान्दै विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटक जब यो सडक खण्डमा पुग्छन्, उनीहरू पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाएको महसुस गर्न थाल्छन् । कुनै पनि देशको राजधानी आवत–जावत गर्ने प्रमुख मार्ग यति विरहपूर्ण, पट्यारलाग्दो, खण्डहर अवस्थामा होला भनी कसैले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् । मुलुकको शान, गरिमा बढाउन वैकल्पिक सडक निर्माणको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै देशी/विदेशी सबैलाई दुःखकष्ट दिएर सत्ताधारी किन रमाइरहेका होलान् ? सांसद, मन्त्री आफ्नै भलाइ, भौतिक सुखसुविधाको लागि मरिहत्ते गर्छन्, जनहितको विषयमा केही गर्दैनन् । यही आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार प्रत्येकको विनियोजित बजेटबाट १०–१० प्रतिशत रकम कटौती गरी सरकारले सीतापाइला–धार्के सडक खण्ड निर्माण गर्ने अभियान थाल्यो भने जनस्तरबाट समर्थन नगर्ने कोही देखिंँदैनन् ?
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ १२:१९